आइजो निदरी छुनुमुनु आइजो | Wagle Street Journal
आइजो निदरी छुनुमुनु आइजो
‘मैले ह्याङ्ओभरमै पत्रकारिता पढें । (न्युयोर्कको) सिराक्युजमा सुरुका दिन मैले न्युयोर्क टाइम्स या वासिङ्टन पोस्ट को खोजी संवादाता हुने चाहना राखें । भ्रष्टाचार, वातावरणीय बेथिती, सरकारी बेरुजु र थिचिएका र निमुखाले भोगेको अन्याय उदांगो पारेर विश्वलाई बचाउन चाहें । पुलित्जर (पुरस्कार) हरू मलाई पर्खिरहेका थिए । करिब एक वर्षजति त्यस्तै आदर्शवादी सपनाहरू देखेपछि मैले एकजना विदेश संवादाताबारेको एउटा फिल्म हेरें, जसमा ऊ युद्धहरू खोज्दै, सुन्दर महिलाहरू फकाउँदै विश्व घुम्थ्यो र कसोकसो पुरस्कार विजेता स्टोरीहरू लेख्ने समय निकाल्थ्यो । ऊ आठवटा भाषा बोल्थ्यो, दारी पाल्थ्यो, कम्ब्याट बुट र कहिल्यै नखुम्चिने खस्रो खाकीका कपडा लाउँथ्यो । त्यसैले मैले त्यस्तै पत्रकार बन्ने निर्णय गरे ।
‘मैले दाह्री पालें, बुट र खाकीका कपडा किने, जर्मन सिक्ने प्रयास गरें, राम्रा केटीहरू फकाउन खोजें । कलेजको सुरुवाती वर्षमा जब मेरो परीक्षाफल ओरालो लाग्न थाल्यो, मलाई सानो बस्तीको अखबारमा काम गर्ने विचारले अँठ्यायो । म यो आकर्षणको वर्णन गर्न सक्दिनँ…
‘म बिहानी खाजा खान्न । त्यो खाइने समयमा म प्रायः उठेकै हुन्न । मध्यरातमा काम गर्न मलाई कुनै अप्ठेरो छैन तर सुत्नचाहिँ म घाम पूरै देखिने गरी र्छलंग नहोउन्जेलसम्म रुचाउँछु । मैले तत्कालै महसुस गरें, फुच्चे साप्ताहिक अखबार चलाउनुको फाइदा म ढिलोसम्म काम गर्न र ढिलोसम्म सुत्न सक्थें । समयसीमा ननाघोस्, स्टोरी त जतिबेला लेखे पनि भइहाल्यो ।’
अब केही प्रष्ट्याउने बेला आयो । माथिको मनोवाद मेरो होइन, विल्ली ट्रयानरको हो । विल्ली आफैंमा चाहिँ एउटा काल्पनिक पात्र हो बेस्ट सेलिङ लेखक जोन ग्रिसामको उपन्यास ‘द लास्ट जुरर’ को । कलेज फेल भएको २३ वर्षे विल्ली क्ल्यान्टन, मिसिसिपीको फुच्चे साप्ताहिक ‘द फोर्ड काउन्टी टाइम्स’ को मालिक हो, जसले कथाअनुसार, धरमराउँदो पत्रिकालाई स्वादिला रिपोर्टिङ र जनताका कुरा लेखेर चल्तीको तुल्यायो ।
चार वर्षघिको त्यो उपन्यास त्यतिबेलै पढ्दा कतिपय सन्दर्भमा विल्लीमा आफूलाई पाउँदा उत्तेजित हुँदै मैले आफ्नो वेबसाइटमा एउटा जर्नल लेखेको थिएँ तर अहिले मेरो ध्यान निद्रामा केन्द्रित छ जो राति हत्तपत्त लाग्दैन, बिहान छुट्दै छुट्दैन । अन्तिमपल्ट कहिले बिहानी खाजा खाएको थिएँ, उदाउँदो सूर्य देखेको थिएँ, सम्झना छैन । प्रत्येक मध्यरात म चाँडै उठ्ने बाचा गर्दै निदाउने संर्घष गर्छु मोबाइलमै हुने अलार्म ठीक समयमै बज्छ- ६ बजे । केही घन्टा अगाडिको बाचा म बिर्सन्न तर जति प्रयास गरे पनि आँखा खुले पो । एकैछिन सुत्छु भनेर पल्टियो, उठ्दा नौ या १०, कहिलेकाहीँ ११ बजेको हुन्छ । त्यसैले ‘सबेरै सुते, सबेरै उठे स्वस्थ, धनी र बुद्धिमान होइन्छ’ भन्ठान्ने र सुताइलाई व्यक्तिको बेहोरासँग जोड्नेहरूका लागि विल्ली ट्र्यानर, सिन्थिया ओजिक र म ‘सुताहा र अल्छे’ हौं ।
‘संसारको नजरमा म खराब बानी भएकी प्राणी हुँ,’ बिहान ३ बजे सुत्ने र मध्याह्नतिर उठ्ने अमेरिकी लेखक सिन्थिया भन्छिन् ।
कम्तीमा बेन्जामिन फ्रयाक्लिनले ‘अर्ली टु बेड, अर्ली टु राइज मेक्स म्यान हेल्थी, वेल्थी एन्ड वाइज’ उखान उनको पुस्तक ‘पुअर रिचर्डस् अल्मान्याक’ मा समावेश गरेदेखि अमेरिकीहरूले सुत्ने बानीलाई व्यक्तिको गुणदोष मापकका रूपमा लिन थालेको न्युयोर्क टाइम्स ले एउटा स्टोरीमा लेखेको छ । जतिबेला (अमेरिकी) अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित थियो, टाइम्स भन्छ, पूरै दिनको काम भ्याउन चाँडै उठ्नुपथ्र्यो र ढिलासम्म सुत्नेहरू सामूहिक सत्प्रयासका बाधक मानिन्थे । नेपाली अर्थतन्त्र त अहिलेसम्म पनि कृषिमै आधारित छ । ‘घोकन्ते विद्या र धावन्ते खेती’ उखान अझै प्रचलनमा छ ।
अहिले पनि, सिकागोस्थित रस युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरको स्लिप डिसअर्डर र्सर्भिस एन्ड रिर्सच सेन्टरका निर्देशक एडवार्ड स्टेपान्स्की भन्छन्- ‘अरू सबै आआफ्नो काममा गइसक्दा पनि सुतिराख्नु निरन्तरको नकारात्मक गुण हो ।’
लाजले भुतुक्कै भएर अनुहार छोप्नु पहिले विश्वका ढिलासम्म सुत्नेहरूले लगभग ढुक्क भए हुन्छ, टाइम्स मा वारेन जोन र एलेक्स विलियम्स लेख्छन्, सबेरै उठ्नुका सम्भावित फाइदा र सकारात्मकताबारे निद्रा अनुसन्धाताहरूले शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । मान्छे कतिबेला उठ्छ भन्ने कुराले उसको आम्दानी या सफलतामा कमै असर पारेको हुन्छ र मान्छेको निद्रा प्रणाली उनीहरूको पूर्ण नियन्त्रणमा हुँदैन भन्ने अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
वैज्ञानिकहरू सबेरै उठ्नेलाई ‘लार्क’ र ढिलोसम्म सुत्नेलाई ‘औल’ भन्छन् र २४ घन्टे अन्तरालमा शरीरमा चल्ने जैविक वृत्तलाई वर्णन गर्न बिहानीपख र साँझपखको कुरा गर्छन् । नेपालमा खासै खोजी भएको छैन तर अनुसन्धाताहरू अमेरिकी जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत उग्र लार्क, त्यतिनै संख्या उग्र औल र बाँकी ८० प्रतिशत ‘बीच कहीँ’ भएको विश्वास गर्छन् । उनीहरूका अनुसार व्यक्ति कुन समूहमा हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उसको महत्त्वाकांक्षा हैन डीएनए हो ।
‘तपाई लार्क हुनुहोस् या औल, सुत्ने समय जैविक रूपमा निर्धारण हुन्छ,’ मिनेसोटा रिजनल स्लिप डिर्सअर्डर सेन्टरका मेडिकल डाइरेक्टर डा. मार्क माहोवाल्डले टाइम्ससँग भनेका छन्- ‘कोही थोरै लार्क या थोरै औल हुनसक्छन् तर धेरै मानिसका लागि सुत्ने बानी बदल्नु भनेको आफ्नो उचाइ र आँखाको रङ बदल्नुजस्तै हो ।’
मलाई अचम्म लाग्छ जब म सुन्छु केही मान्छेबाट कि उनीहरूलाई कतिपय रात तीन घन्टा सुतेपुग्छ, दिउँसो सुत्नु पर्दैन र दिनभरको जीवन सामान्य हुन्छ । मलाई अचम्म लाग्छ जब म सुन्छु केही मान्छेबाट कि उनीहरू ओछ्यानमा पल्टेको केही सकेन्ड या मिनेटमै भुसुक्कै निदाउँछन् । अचम्म किन लाग्छ भने म ती दुवै काम गर्न सक्दिनँ । हत्तपत्त निदाउने नसक्ने लक्षणलाई इन्सोम्निया भनिन्छ र म इन्सोम्नियाक हुँ । क्रिस्टोफर नोलानको २००२ को हलिउड फिल्म ‘इन्सोम्निया’ मा अभिनेता अल पचिनोले इन्सोम्नियालाई जीवन्त उतारेका छन् ।
त म भन्दै थिएँ, केही मान्छे तीन/चार घन्टा सुते पुग्छ भन्दै धाक लाउँछन् । त्यस्तो धाकमा ‘जैविक दम’ नहुने डाक्टरहरूको अनुसन्धानले देखाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, सान डिएगोका निद्रा अनुसन्धाता डा. ड्यानियल क्रिप्केका अनुसार एउटा अध्ययनका क्रममा आफूलाई पाँच घन्टाको सुताइले पुग्ने दाबी गर्ने व्यक्तिहरूले दिउँसो या सप्ताहन्तमा टन्न सुतेर अपुग मात्रा पूरा गर्ने गरेको पाइयो ।
युनिभर्सिटी अफ युटाको स्लिप वेक सेन्टरका मेडिक डाइरेक्टर डा. क्रिस्टोफर जोन्सका अनुसार सबैरै उठ्ने मान्छेहरू भएजस्तै बिहानी झिंगा र बिहानी मुसाहरू पनि हुन्छन् । जनसंख्यामा हुने सुत्ने बानीको विविधताले प्रजातिहरूलाई सहयोग पुर्याएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘घाँसमा लम्किँदै सिंह आएको आवाज सुन्न कुनै एक सदस्य रातभरि जागा बसे त्यसको पूरै प्रजाति सुरक्षित हुने भयो,’ उनले भने ।
पक्कै हो, हाम्रो जीवनशैली सिंहको डरबाट नियमित हुँदैन बरु ९-५ को दैनिकीबाट हुन्छ । (विल्ली ट्रयानरजस्तै म धन्य छु पत्रकारिताप्रति किनकि यो पेसा त्यो दैनिकीमा चल्दैन ।) त्यो दैनिकीले लार्कहरूलाई फाइदा पुगे पनि रात्री लाटोकोसेराहरू सबेरै उठ्नेभन्दा कम सफल हुने गरेको प्रमाणचाहिँ खासै छैनन् । २००१ मा क्यालिफोर्नियाको सान डिएगोका पौढहरूमाझ गरिएको अध्ययनले उठ्ने समय र आम्दानीबीच सम्बन्ध नभएको देखायो । सफल असफल पनि केलाई भन्ने ? भनिन्छ, अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस बिहान ५ बजे उठ्छन्, ७ बजे अफिस पुग्छन् र राति १० बजे सुत्छन् । बुसभन्दा कुनै हिसावले पनि कम सफल नमानिने रुसी प्रधानमन्त्री (पूर्वराष्ट्रपति) भ्लादिमिर पुटिन बिहान ११ बजे उठ्छन् र राति २ बजेसम्म काम गर्छन् ।
बिजुली बत्ती, कम्प्युटर, इन्टरनेट र केवल टीभीले औलहरूलाई सबैभन्दा सजिलो बनाइदिएका छन् । निद्रा लागेन, कम्प्युटर खोल्यो, वेब सर्फगर्यो, टीभी हेर्यो बस् । अहिले त झन् के छ, टीभीमा युरो कप आइरहेको छ, गेमै नछुट्ने । ‘राति म इन्टरनेटमा किनमेल गर्छु, बिलहरू तिर्छु, बैंकिङ कारोवार गर्छु,” क्यानडाको सास्काचेवनकी क्यारोलिन स्कर भन्छिन् । किन अचम्म मान्नु, ढिला उठ्ने क्यारोलिन मानिसहरूको सुत्ने बानीबारेको पुस्तक ‘बर्डस अफ अ डिफरेन्ट फिदर’ कि लेखक हुन् ।
>शीर्षकको जस वि.सं. २००० को दशकतिर कलानाथ अधिकारीले गाएको ‘आइजो निदरी छुनुमुनु आइजो’बोलको गीतलाई जान्छ जसलाई केही बर्षघि नेपथ्यका अमृत गुरुले गाएर ‘भेडाको ऊन जस्तो’ एल्बममा सामेल गरेका थिए । साँची, लेख पढ्दा पनि निद्रा लागेन भने त्यो गीत प्रयास गर्ने कि ?
This entry was posted in वाग्ले जर्नल (कोसेली) and tagged निद्रा on June 21, 2008 by Dinesh Wagle.
← Makai ra Manab: Corn Tassel andaHuman Face घर हाम्रो दरवार →
1 thought on “आइजो निदरी छुनुमुनु आइजो”
Nirjala Pandey September 27, 2011 at 5:55 pm
खोइ मलाइत कैले रातीको २ बाजे निन्द्रा लाग्छ पैन्टिङ गर्न बस्दा कैले भने चाडै निदाइन्छ, एक दिन म र मेरो दाईले हामी कति दिन सम्म निदाउन सक्छौ भनेर सुतेको त हामि ३ दिन सम्म पनि कोठा वाट बाहिर न निस्की कन सुतेको सुत्यै तर खाना भने पकायेर पकाएर खाएका थियौ, त्यसैले यतिनै समयमा सुत्नु पर्छ र यतिनै समयमा उठनु पर्छ भन्ने हुदैन जस्तो लाग्छ मलाइत , काम भए ढिला सुत्ने अनी चाडैउथ्ने होईन भने आफो मन लगेको बेला उठ्द काम मज्जा आउदैन त ।